လက်သွေးခြင်း (၁) | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
လက်သွေးခြင်း (၁)	Posted by mm thinker on June 26, 2008
Posted in: Art.	Tagged: Art.	၁၉၉၉ ခုနှစ် ပန်းချီသမားတွေနဲ့ ဘ၀ကို ရေစုန်မျှောနေချိန်။ အဲဒီကာလတွေတုန်းက ဆရာသမားတွေ ဆေးခွက်ကို ၀င်နှိုက်ပြီး လက်တည့်စမ်းဖြစ်တဲ့ ပုံကားတချို့ပါ။ အဲဒီကာလတွေ ၀န်းကျင်တုန်းက (ခုတော့မသိ) ပန်းချီပြပွဲမှာ ဖားပုံတွေကို တင်ခွင့်မပေးပါဘူး။ အာဏာရှိသူတွေက `ဖား´ပုံကို `ဖား´တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို သရော်တယ်လို့ မဆီမဆိုင် ယူဆကြလို့ပါပဲ။ (လိပ်ပြာ မလုံလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ ညာလို့ မရဘူး မဟုတ်လား။) မလုပ်နဲ့ဆို ရွဲ့ချင်တဲ့ ဒီကောင်က လက်တည့်စမ်းတာတောင် ဖားပုံရွေးပြီ ရေးဖြစ်ပါတယ်။
၆ လက်မ x ၈ လက်မ
← Buddhism As A Religion (2)	ကွန်ပျူတာဓာတ်စာအုပ် တိုက်ပွဲတွင် ဒဏ်ရာရခြင်း →	0 comments on “လက်သွေးခြင်း (၁)”
win zaw on June 26, 2008 at 8:32 pm said:
လက်ရာကောင်းပန်ချီပုံတွေ စိတ်ဝင်စားတယ်။ပန်းချီလက်ရာတွေ မျှော်နေပါမယ်။